म लागि थियो छैन सेक्स 10 वर्ष - समाचार नियम
म लागि थियो छैन सेक्स 10 वर्ष
शीर्षक यो लेख “म लागि थियो छैन सेक्स 10 वर्ष” पामेला, Stephenson Connolly द्वारा लेखिएको थियो, गार्जियन सोमबार 21 औं डिसेम्बर लागि 2015 08.00 UTC
म लागि थियो जसले गरेको छैन सेक्स एक 46 वर्षीया महिला हुँ 10 वर्ष. यो योजना कहिल्यै, तर म एक सदैव सर्कलमा अड्केको छु: म एक संभावित साझेदार यो व्याख्या सक्छ कसरी यति चिन्ता र अब यसलाई मा जान्छ, बदतर यो हुन्छ. म सेक्स र स्नेह बिना मेरो जीवन बाँकी जीवन बिताउन चाहँदैनन्.
अर्को व्यक्तिसँग यौन जडान गर्न सैद्धांतिक तयार हुँदा राम्रो पहिलो चरण हो. तपाईंले केही जोखिम लिन हुनेछ, हुनत, र insecurities र embarrassments विरुद्ध कसैले लागि सानो रक्षा छ, कुनै कुरा तिनीहरूले हुन सक्छ कसरी यौन अनुभव. वास्तबमा, हुनुको तिरस्कार गर्न खुला - पनि गिल्ला - अगाडि आफ्नो काम को एक महत्वपूर्ण भाग हो. जब असुविधा हुन्छ, बस सास फेर्न र यसलाई सहन गर्न आफैलाई बताउन.
अहिलेको लागी, रमाइलो र मित्रता लागि बस अरूसित कनेक्शन बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास. तपाईं आफैलाई थप gregarious बन्न अनुमति भने, ढिलो होस् वा पछि स्वाभाविक तपाईं आकर्षित गरिनेछ कसको कसैलाई भेट्न हुनेछ. त्यस बिन्दु मा, तपाईं साँच्चै आफ्नो सान्त्वना क्षेत्र छोडेर आफ्नो इच्छा बाटो नेतृत्व दिनु हुनेछ.
कसम अब देखि आफ्नो शरीर गर्न Kinder हुन, र तपाईं खुशी छ योग्य छ कि धारणा अँगालेको. हरेक एक मानव अर्को आकर्षक हुन सक्छ. र आफ्नो दीर्घकालीन ब्रहृमचर्य बारेमा संभावित साझेदार 'नकारात्मक दृष्टिकोण चिन्ता छैन: तपाईं तिनीहरूलाई बताउन छैन, तर पनि यदि तपाईं, धेरै मानिसहरू तपाईंले उच्च स्तर मान गर्नेछ.
• पामेला, Stephenson Connolly एक अमेरिकी आधारित मनोचिकित्सक यौन विकार मा विशेषज्ञता छ.
• तपाईं यौन मामिलामा मा पामेला, Stephenson Connolly देखि सल्लाह चाहनुहुन्छ भने, हामीलाई आफ्नो चिन्ता को एक संक्षिप्त विवरण पठाउन private.lives@theguardian.com (कृपया संलग्नहरू पठाउन छैन). हरेक हप्ता, पामेला जवाफ एक समस्या रोज्ने, जो अनलाइन र छापा प्रकाशित हुनेछ. उनले व्यक्तिगत पत्राचार प्रवेश गर्न सक्ने कुरामा पछुतो.
← तपाईं तपाईंको फोन चार्ज गर्न तपाईंको मोजे मा Pee दिनुहुन्छ? ठूलो नेता आफ्नै यसलाई सबै के छैन →